Waxaa goordhow Magalada Kismaayo ka dhacday doorashada Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland oo ay ku tartamayeen Afarax Musharax oo uu ku jiray Madaxweynaha waqtiga xilheyntiisa ay dhamaatay ee Axmed Maxamed Islaam.
Musharixinta ayaa waxaa u codeynayay 74 Mudane oo ah Xildhibaannada Cusub ee Baarlamaanka labaad ee Jubbaland,waxaana wareega koowaad ee Codadkii la dhiibtay Saddex meelood laba meel kusoo baxay in uu markale Madaxweynaha Jubbaland noqdo Axmed Maxamed Islaam(Madoobe)
Inta aan lagu dhawaaqin natiijada codadkii la dhiibtay iyo sida ay musharixiinta u kala heleen ayaa waxaa hoolka doorashada ay ka socotay qabsaday sawaxan iyo sacab farabadan.
Hoos Ka Akhriso Codadka ay kala heleen Musharixiintii ku tartantay doorashada Jubbaland.
3: Maxamed Cumar Geedi 0
4: Canab Maxamed Daahir 17 mana jirin cod halaabay
Horay ayaa loo saadaalinayay in Axmed Maxamed Islaam markale loo dooranayo Madaxweynaha Jubbaland, iyada oo ay noqoneyso markii Saddexaad ee uu noqdo Madaxweynaha Jubbaland.
Goordhow la socda tirada codadka ay kala heleen musharixiinta iyo Sawirada.